Goobaha ugu sareeya ee Maraykanka si aad lacagta u badbaadiso adigoo jooga huteelka Airbnb
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » Goobaha ugu sareeya ee Maraykanka si aad lacagta u badbaadiso adigoo jooga huteelka Airbnb
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Jabinta Hawaii • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dadka • jiga • Shopping • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Goobaha ugu sareeya ee Maraykanka si aad lacagta u badbaadiso adigoo jooga huteelka Airbnb.
Goobaha kirada ee fasaxyada waxay bixiyaan joogis gaar ah oo leh sheekooyin si loo sheego, oo u oggolow martigaliyayaasha inay sameeyaan xoogaa lacag ah oo dheeri ah inta ay magaalada ka maqan yihiin, laakiin runtii wali miyay jaban tahay?
Celceliska qiimaha habeenkii ee qol laba hudheel ah oo u dhow Xeebta Waikiki waa $74, halka joogitaanka Airbnb la mid ah, ay kugu kacayso $271.
Joogitaanka habeennimo ee agagaarka Beerta Qaranka ee Grand Teton caadi ahaan waxay ku kacaysaa kaliya $231 hoteel laakiin waa $847 Airbnb ah.
Qof kastaa wuxuu u baahan yahay nasasho mar mar, fasaxyaduna waa hab hubaal ah oo lagu nasto oo lagu sameeyo xusuus cusub. Si kastaba ha ahaatee, kharashyada fasaxa ayaa kordhin kara ka hor intaadan ogaanin badideenna waxay doorbidi lahaayeen dhacdooyinka nolosha beddela, xusuusta, iyo cuntada qalaad, halkii ay ku afuufi lahaayeen miisaaniyada qol.
Way adagtahay in la ogaado nooca hoyga ugu fiican miisaaniyadaada. Iyadoo Airbnb laga heli karo ku dhawaad ​​magaalo kasta, laga bilaabo London ilaa Hong Kong, way fududahay waligaa in la kiraysto.
Khubarada warshaduhu waxay falanqeeyeen qiimayaasha liiska Airbnb iyo huteelada 80ka goobood ee safarka ugu sarreeya, ee ku yaal Maraykanka iyo adduunka oo dhan, si ay u muujiyaan habka miisaaniyad-saaxiibtinimo ee aad ku joogi karto.
1. Xeebta Waikiki, Hawai
Badbaadinta boqolkiiba: 72.86%
Jannada Hawaiian ee yaabka leh waxay ku taal gudaha xaafadda Honolulu ee Jasiiradda Oahu. Caan ku ah xeebaheeda ciid-cad iyo badaha buluugga ah ee deggan, Waikiki soo jiidata kumanaan dalxiisayaal ah sanad walba waana goobta ugu weyn ee fasaxa ee jasiiradda.
In kasta oo aaggu uu leeyahay in ka badan 300 oo goobood oo Airbnb ah, hudheelada iyo goobaha nasashada ayaa u badan xeebta. Siciradoodu aad bay u kala duwan yihiin oo helitaanka waxyaabaha raaxada sida barkadda iyo meelaha isboortigu waxay la macno noqon karaan inaad bixiso wax ka badan.
Haddana celceliska qiimaha habeenkii ee qol laba hudheel ah oo dhow Xeebta Waikiki kaliya waa $74, halka joogitaanka Airbnb la mid ah, waxay kugu kici doontaa $271! Marka loo eego 72.9% calaamadaynta, fasax-bixiyeyaasha ayaa u fiicnaan lahaa inay doortaan ikhtiyaarka dhaqameed.
2. Beerta Qaranka ee Grand Teton, Wyoming
Badbaadinta boqolkiiba: 72.79%
Markaad ka fikirto jardiinooyinka qaranka ee Maraykanka, Yellowstone, Yosemite ama Siyoon waxay u badan tahay inay maskaxda ku hayaan. Si kastaba ha ahaatee, muuqaalka muuqaalka si siman u soo jiidanaya Beerta qaranka ee Grand Teton soo jiidata dalxiisayaal tacabur doon ah.